I-Semalt Yethula I-Web Best Crawler Tools Ukuze Ihlaziye Amawebhusayithi
Ukukhwabanisa kweWebhu, okuvame ukubhekwa njenge-web scraping, kuyinkqubo lapho iskriphthi esenzakalelayo noma uhlelo lugxilisa inetha ngokulandelana nangokucacile, okubhekiswe kwedatha entsha nekhona. Ngokuvamile, ulwazi esikudingayo luboshwe ngaphakathi kwebhulogi noma iwebhusayithi. Ngenkathi amanye amasayithi enza imizamo yokwethula idatha kwifomethi ehlelekile, ehlelekile nehlanzekile, iningi labo lihluleka ukwenza kanjalo - servidores de hosting en peru. Idatha yokukhamba, ukucubungula, ukukhipha, nokuhlanza kuyadingeka ebhizinisini le-intanethi. Kuzodingeka uqoqe ulwazi oluvela emithonjeni eminingi futhi ulondoloze kumininingo yolwazi oluqondene nebhizinisi ngezinhloso zebhizinisi. Ngokushesha noma kamuva, kuzodingeka uhambe ngezinkundla ze-intanethi nemiphakathi ukuze uthole ukufinyelela kuzinhlelo ezihlukahlukene, izinhlaka, nesofthiwe yokubamba idatha kusuka kusayithi.
I-Cyotek WebCopy ingenye yama-web scrapers kanye nabakwa-crawlers abangcono kakhulu kwi-intanethi. Iyaziwa nge-web based based, user-friendly interface futhi yenza kube lula ngathi ukugcina ithrekhi yezikhawu eziningi. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo luyinkimbinkimbi futhi luza nezinqolobane eziningi ze-backend. Kuyaziwa ngokusekelwa kwemiyalezo yomyalezo kanye nezici eziphathekayo. Lolu hlelo lungazama kalula kalula amakhasi wewebhu ahlulekile, ahlasele amawebhusayithi noma amabhulogu ngaminyaka futhi enze imisebenzi ehlukahlukene kuwe. I-Cyotek WebCopy idinga nje ukuchofoza okubili kuya kokubili ukuze usebenze umsebenzi wakho futhi ingakhansela idatha yakho kalula. Ungasebenzisa leli thuluzi emafomini asatshalaliswe nabakhasimende abaningi abasebenza ngesikhathi esisodwa. Ilayisensi yi-Apache 2 futhi ithuthukiswe yi-GitHub..
HTTrack iyilabhulali edumile ekhwanyelwe emtatsheni odumile we-HTML obizwa ngokuthi yi-Beautiful Soup. Uma unomuzwa wokuthi ukukhwabanisa kwakho kwe-web kufanele kube okulula futhi okuyingqayizivele, kufanele uzame lolu hlelo ngokushesha ngangokunokwenzeka. Kuzokwenza inqubo ehambayo ilula futhi ilula. Into okumele uyenze ukuchofoza amabhokisi ambalwa bese ufaka ama-URL wesifiso. I-HTTrack ilayisensi ngaphansi kwelayisensi ye-MIT.
I-Octoparse iyinhlangano enamandla yokuhlunga iwebhu esekelwe umphakathi osebenzayo onjiniyela bewebhu futhi ikusiza ukwakha ibhizinisi lakho ngokushelelayo. Ngaphezu kwalokho, ingakwazi ukuthumela yonke inhlobo yedatha, ukuqoqa nokuyigcina kumafomethi amaningi afana ne-CSV ne-JSON. Ibuye inezandiso ezimbalwa ezakhelwe ngaphakathi noma ezenzakalelayo zemisebenzi ehlobene nokuphathwa kwe-cookie, ama-spoofs e-agent yomsebenzisi, kanye nabagibeli abavinjiwe. I-Octoparse inikeza ukufinyelela kuma-APIs awo ukwakha izengezo zakho zomuntu siqu.
Uma ungakhululekile ngalezi zinhlelo ngenxa yezinkinga zabo zokubhala, ungazama i-Cola, i-Demiurge, i-Feedparser, i-Lassie, i-RoboBrowser, namanye amathuluzi afanayo. Ngandlela-thile, i-Getleft yinye ithuluzi elinamandla elinokuningi okukhethwa kukho kanye nezici. Ukusebenzisa, akudingeki ube uchwepheshe wekhodi ye-PHP ne-HTML. Leli thuluzi lizokwenza inqubo yakho yokukhwabanisa yewebhu ibe lula futhi isheshe kunezinye izinhlelo zendabuko. Isebenza kahle kusiphequluli futhi ikhiqiza i-XPath encane futhi ichaza ama-URL ukuze abenze kahle. Ngezinye izikhathi leli thuluzi lingahlanganiswa nezinhlelo ze-premium zohlobo olufanayo.